waxaan Inkastoo image oo dhan in qaddar kaalin muhiim ah ku dhacay jacayl, tallaabooyinka aannu mararka qaar la hadli kartaa buunkii. Hoos, waxaan ku qaawiyey siyaabo kala duwan oo aad ka heli kartaa jacaylka noloshaada.
Jidka loo yaqaan Little #1: U Diyaar Love
Xiriirka A qaadataa waqti, go'an, iyo nuglaanta. Furaha xiriir caafimaad iyo guul waa in marka hore naftaada jeclahay, Waayo, jacaylka kuu ogolaanaya in aad si dhab ah u jecel qof kale. xiriirka Strong, naftaada iyo dadka kale la, waxaa laydinka dul dhisay trust, daacadnimo, iyo isgaarsiinta.
Jidka loo yaqaan Little #2: Baro iyo Aqoonsiga Standards Your
Inkasta oo ay tahay cadaalad darro in qof xukumi gebi by ayna duleella ay, waxaa muhiim ah in la dhiso xadka. Waxaynu wada ognahay in ay jiraan fikirro qaarkood iyo habdhaqanada hor joogsan kara xiriirka. Waxa kale oo aanu ognahay in ay jiraan dabeecado gaar ah iyo sifooyinka in aan doonayaa oo u baahan in xiriir. Oge kuwa kaa caawin doontaa in waddada si aad kale oo muhiim ah loo helo.
Jidka loo yaqaan Little #3: Ogow farqiga u dhexeeya jecel Person oo jecel waxay Jacayl
Wax garaaca iyagoo jacayl; Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood dareen this adkaado fikirrada run ku saabsan lammaane. Waxaa muhiim ah inaad bixiso si haddii aad kala saari karaa tayada asaasiga ah ee qofka iyo kuwa aad mashaqeeyo on dareenka.
Jidka loo yaqaan Little #4: Noqo ee Place Xuquuqda at Time Xuquuqda
Waxaa jira meelo qaarkood halka aan kaliya dareemayaa waxaan nahay in aannu element. Haddii ay saacad ku faraxsanahay saaxiibo, at riwaayad ama farshaxanka show a, ama fasal, waxaa jiri. Your shakhsiyadda iftiimi doonaa, dadka barbaro inaad.
Jidka loo yaqaan Little #5: Diririn, waayo, Fahanka Dareenka hor Fahanka Physical
Iyadoo helo “jacaylka noloshaada”, bond qiiro waa muhiim. Iyadoo yaacaya galay Shukaansiga jirka khasab ma aha in wax xun, waxaa bond dareen dheeraad ah oo ku adag tahay in ay maraan samayn kartaa.
Jidka loo yaqaan Little #6: Naftaada ku kalsoonow
Dhegayso mindhicirka, noqon raaxo leh waqtiga aad, iyo samir in xukummadaadu. Isla mar ahaantaa, waxaa muhiim ah in sii furnaato fikradaha iyo aragtiyaha cusub oo ku saabsan jacaylka.
Haddii ay qaddar, kuwaas oo siyaabo yar oo loo yaqaan, ama labadaba – waxaa muhiim ah in aan marnaba quusan on jacaylka runta ah. Waayo, mar aad u leedahay, waa dareen ugu abaal adduunka.